Novonoin'ilay mpamono olona ho lasa mpamono olona ireo tra-boina - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Novonoin'ilay mpamono olona ho lasa mpamono olona ireo tra-boina
Novonoin'ilay mpamono olona ho lasa mpamono olona ireo tra-boina
by Piper St. James Oktobra 27, 2019
by Piper St. James Oktobra 27, 2019 5,055 hevitra
Ilay mpamono olona valifaty Joe Metheny dia nanomboka ny hatezerany rehefa nalain'ny vadiny ny zanak'izy ireo ary nandositra ny tranony tany Baltimore, Maryland. Io ilay spark izay nanomboka azy rehetra.
Rehefa nosamborina i Metheny tamin'ny 2016 dia niaiky ny heloka vitany izy, ary nanome tsiny ny filàny famaliana faty ho an'ny vadiny sy ilay lehilahy navelany ho azy. Na izany aza, io hatezerana io no namorona sy namahana zavatra lalina kokoa tao anatiny.
Raha nandrehitra ny iraka nampanaovina azy ny fahatezerana dia sendra olona maro niharan-doza i Metheny izay sendra niampita ny lalany teo amin'ny fiainana. Amin'ny maha-outlet amin'ny herisetra sy ny lolom-po azy tamin'ny nandaozana azy vao haingana, ny vady sambatra taloha dia mila outlet amin'ny fahatezerany; ary izany famonoana olona izany dia famonoana olona, ​​fanolanana ary famotehana.
Ny ankamaroan'ireo lehilahy sy vehivavy sendra sendra toerana ireo tamin'ny fotoana tsy nety dia mpivezivezy, tsy manan-kialofana ary mpivaro-tena. Ny olona tsy misy mahatsikaritra dia lasa na tsy hita.
Mety hitovy amin'ny tantara efa henonao taloha io, fa ny mampisaraka an'i Metheny amin'ny mpamono "mahazatra" anao dia ny fomba nanipazany ny fatin'ireo niharany tsy fantatra.
Nopotehin'i Metheny ny vatan'izy ireo, nangoniny ny nofony sy ny hena, ary nafangaro tao anaty henan-kisoa sy hen'omby nampiasainy mba hanaovana hamburger. Amidiny eo amin'ny sisin'ny arabe ireo hamburger ireo avy eo.
Nilaza ny mpamono fa mitovy amin'ny tsiron'ny henakisoa ny vatana. Nilaza izy fa "Raha afangaroinao [amin'ny hena voatoto] dia tsy misy afaka manavaka izany." Raha ny marina, tsy mbola nisy mpividy na iray aza, ary mpividy ny heloka vitany, nitaraina momba ny tsiron'ny sakafon'izy ireo.
Mikasika ireo faritra amin'ny vatana izay tsy mety amin'ny mpanampy hamburger dia nalevin'i Metheny tao anaty kamio kamio.
Toa tsy mifototra amin'ny valifaty intsony ny heloka vitany. Fa kosa, rehefa nihalany ny vata fampangatsiahana an'i Metheny dia nivoaka izy ary nitady fanahy mahantra iray hafa ho an'io singa manokana io ao amin'ireo hamburger natolony ho an'ny mpanjifany. Toa nanana ny tena tsirony tamin'ilay famonoana izy.
Tamin'ny fotoana nisamborana azy dia nilaza izy fa namono olona 10. Hoy izy tamin'ny manampahefana: "Ny zavatra tokiko tsy dia misy vokadratsy amiko amin'izany dia ny tsy famonoako ireo reny roa izay tena narahiko, ary izany dia ilay vehivavy taloha sy ilay zaza tsy ampy taona nifaneraserany."
Metheny dia nandany am-polony taona teo am-ponja taorian'ny nahazoany sazy roa mandra-pahafatiny noho ny famonoana an'i Kathy Spicer sy Cathy Ann Magaziner.
Tamin'ny taona 2017 dia hitan'ny mpiambina ny fonja maty tao amin'ny sela izy. 62 taona izy.